လိမျနမှေနျးသိသိရဲ့နဲ့ နားထောငျပေးတတျတဲ့ နားတဈစုံ ကြှနျမမှာ ရှိတယျ – Shinyoon
လိမျနမှေနျးသိသိရဲ့နဲ့ နားထောငျပေးတတျတဲ့ နားတဈစုံ ကြှနျမမှာ ရှိတယျ ။ ဒါပမေယျ့ တခွားသူတှလေို အရသာခံပွီး နားထောငျပေးတတျမြိုးတော့ မဟုတျဘူးပေါ့ ။ အပငျပနျးခံပွီး ကိုယျ့ကို မသိစခေငျြလို့ လိမျ့နတေဲ့အရာကွီးကို ကိုယျက သိပွီးသားကွီးလို့ ပိတျပွီးပွောလိုကျရငျ တဈဖကျက ရှကျသှားမှာ စိုးတဲ့စိတျနဲ့ မပွောဖွဈခဲ့တာပါ ။
မသိဖာသာ နတေယျဆိုတာကလဲ တဈဖကျလူအပျေါအားနာလို့ ။ မသိလို့ တုံးလို့အလို့ ခေါငျးငုံ့ခံနတောလို့တော့ မတှေးစခေငျြဘူး သိတိုငျးလဲ မပွောနဲ့ မွငျတိုငျးလဲ မပွောနဲ့ တဲ့ အဲ့တာ ကိုယျ့အတှကျ သူ့အတှကျ ပိုပွီးအဆငျပွတေယျဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ကြှနျမ နထေိုငျကငျြ့သုံးလာတာပါ ။
ကိုယျသိသမြှ မွငျသမြှတိုငျးကိုသာ တဈဖကျလူအမှားတှနေဲ့ လိုကျယှဥျပွီး ပွောနရေငျ ငွငျးရ ခုံရတာနဲ့ အနားရှိသမြှ လူတှအေကုနျနဲ့ ရနျဖွဈနရေငျး အခြိနျတှေ ကုနျသှားလိမျ့မယျ ။ ကိုယျသိပွီးသားအရာတှေ လာပွောလို့လဲ မသိသလိုလေး နားထောငျပေးတတျတယျ ပွီးမှ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသာ ဆငျခွငျပါတယျ ။
သူက အပျေါယံလေးပါလားလို့ သိတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘကျကအတတျနိုငျဆုံး ရလေိုကျငါးလိုကျလေး ဆကျဆံတယျ ရငျဘတျကွီးနဲ့ ရငျးထားတာမြိုး အမြားကွီး မြှျောလငျ့ထားတာမြိုးတှေ မလုပျတော့ဘူး ။ မကောငျးလို့ မကောငျးဘူးဆိုတာမြိုးလဲ မလုပျပါဘူး မကောငျးလဲ ပေါငျးပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျပေါငျး စိတျခှာတဲ့ နညျးနဲ့ပဲ ပေါငျးတယျ မဟုတျရငျ အကုနျ ရနျသူတှခေညျြးဖွဈနတေော့မှာပေါ့ ။
မိတျဆှေ ဆို မိတျဆှေ အဆငျ့မှာထားတယျ သူငယျခငျြးဆို သူငယျခငျြးအဆငျ့မှာထားတယျ မိတျကောငျးဆှကေောငျး နဲ့တှတေဲ့အခါ ကိုယျ့ဘကျက အတတျနိုငျဆုံး ပွနျကောငျးတယျ ။ မိတျဟောငျး ဆှဟေောငျးတှနေဲ့ တှတေဲ့အခါ အတိတျတှအေကွောငျးပွောတယျ ။ လူ . . . ကိုယျနဲ့မတူတိုငျးသာ ရနျသူဖွဈရမယျဆိုရငျ ပေါငျးရသငျ့ရမယျ့လူဆိုတာ ရှိလာတော့မှာမဟုတျဘူးလေ ။
သိပွီးသားအရာကွီးကို ကိုယျ့ရှလေ့ာလိမျ့လို့လဲ အငွငျးအခုနျတှနေဲ့ ပွဿနာအဖွဈမခံတော့ဘူး ။ အျော အငျး အငျး ဆိုတဲ့စကားလုံးတှနေဲ့ မသိသလိုလေးပဲ နားထောငျပေးဖွဈလာတယျ ။ ငါသိပွီးသားကွီးလို့ တဈဖကျကို ပိတျပွီးပွောလိုကျရငျ သူ အပငျပနျးခံပွီး လိမျထားသမြှ အရာအားလုံး သဲထဲရသှေနျဖွဈသှားမှာလေ ။ ပွီးရငျ ကိုယျ့အပျေါ ပိုပွီး အမှတျအတေးထားလိမျ့မယျ ။ မိတျဆှကေောငျးတဈယောကျ မဟုတျခဲ့ရငျတောငျ ရနျသူတဈယောကျတိုးလာမယျ့ လုပျရပျမြိုး ကြှနျမ အတတျနိုငျဆုံးရှောငျပါတယျ ။ ကြှနျမကို လိမျပါ လိမျလို့ရတယျ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမဆိုတာမြိုးက ကိုယျသိပွီးသားအရာတှကေို အပငျပနျးခံပွီး လာလိမျလဲ ငွိမျငွိမျလေး နားထောငျတတျတဲ့အမြိုးပါ ။
လိမ်နေမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ နားထောင်ပေးတတ်တဲ့ နားတစ်စုံ ကျွန်မမှာ ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေလို အရသာခံပြီး နားထောင်ပေးတတ်မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ အပင်ပန်းခံပြီး ကိုယ့်ကို မသိစေချင်လို့ လိမ့်နေတဲ့အရာကြီးကို ကိုယ်က သိပြီးသားကြီးလို့ ပိတ်ပြီးပြောလိုက်ရင် တစ်ဖက်က ရှက်သွားမှာ စိုးတဲ့စိတ်နဲ့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
မသိဖာသာ နေတယ်ဆိုတာကလဲ တစ်ဖက်လူအပေါ်အားနာလို့ ။ မသိလို့ တုံးလို့အလို့ ခေါင်းငုံ့ခံနေတာလို့တော့ မတွေးစေချင်ဘူး သိတိုင်းလဲ မပြောနဲ့ မြင်တိုင်းလဲ မပြောနဲ့ တဲ့ အဲ့တာ ကိုယ့်အတွက် သူ့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကျွန်မ နေထိုင်ကျင့်သုံးလာတာပါ ။
ကိုယ်သိသမျှ မြင်သမျှတိုင်းကိုသာ တစ်ဖက်လူအမှားတွေနဲ့ လိုက်ယှဉ်ပြီး ပြောနေရင် ငြင်းရ ခုံရတာနဲ့ အနားရှိသမျှ လူတွေအကုန်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေရင်း အချိန်တွေ ကုန်သွားလိမ့်မယ် ။ ကိုယ်သိပြီးသားအရာတွေ လာပြောလို့လဲ မသိသလိုလေး နားထောင်ပေးတတ်တယ် ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ဆင်ခြင်ပါတယ် ။
သူက အပေါ်ယံလေးပါလားလို့ သိတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံး ရေလိုက်ငါးလိုက်လေး ဆက်ဆံတယ် ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ရင်းထားတာမျိုး အများကြီး မျှော်လင့်ထားတာမျိုးတွေ မလုပ်တော့ဘူး ။ မကောင်းလို့ မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးလဲ မလုပ်ပါဘူး မကောင်းလဲ ပေါင်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွာတဲ့ နည်းနဲ့ပဲ ပေါင်းတယ် မဟုတ်ရင် အကုန် ရန်သူတွေချည်းဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ ။
မိတ်ဆွေ ဆို မိတ်ဆွေ အဆင့်မှာထားတယ် သူငယ်ချင်းဆို သူငယ်ချင်းအဆင့်မှာထားတယ် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း နဲ့တွေတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်ကောင်းတယ် ။ မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ အတိတ်တွေအကြောင်းပြောတယ် ။ လူ . . . ကိုယ်နဲ့မတူတိုင်းသာ ရန်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် ပေါင်းရသင့်ရမယ့်လူဆိုတာ ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေ ။
သိပြီးသားအရာကြီးကို ကိုယ့်ရှေ့လာလိမ့်လို့လဲ အငြင်းအခုန်တွေနဲ့ ပြဿနာအဖြစ်မခံတော့ဘူး ။ အော် အင်း အင်း ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ မသိသလိုလေးပဲ နားထောင်ပေးဖြစ်လာတယ် ။ ငါသိပြီးသားကြီးလို့ တစ်ဖက်ကို ပိတ်ပြီးပြောလိုက်ရင် သူ အပင်ပန်းခံပြီး လိမ်ထားသမျှ အရာအားလုံး သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သွားမှာလေ ။ ပြီးရင် ကိုယ့်အပေါ် ပိုပြီး အမှတ်အတေးထားလိမ့်မယ် ။ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ရန်သူတစ်ယောက်တိုးလာမယ့် လုပ်ရပ်မျိုး ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ် ။ ကျွန်မကို လိမ်ပါ လိမ်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မဆိုတာမျိုးက ကိုယ်သိပြီးသားအရာတွေကို အပင်ပန်းခံပြီး လာလိမ်လဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး နားထောင်တတ်တဲ့အမျိုးပါ ။